အထီးကြွက်များတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာဆုလာဘ် - သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြေအနေကို ဦး စားပေးမှုများအပေါ်လိင်အတွေ့အကြုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (၂၀၀၉) - Your Brain On Porn
Horm ပြုမူနေ။ 2009 ဇန်နဝါရီ; 55 (1): 93-7 ။ Doi: 10.1016 / j.yhbeh.2008.08.012 ။ EPub 2008 စက်တင်ဘာ 12 ။
Tenk CM1, Wilson က H ကို, Zhang ကမေး, အိုး KK, Coolen LM.
အမျိုးမျိုးသောအပြုအမူမော်ဒယ်များနှင့်လေ့လာမှုများအထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကြိုးများနှင့်အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်းအကြံပြုသက်သေအထောက်အထားပေးပါပြီ။ သို့သျောလညျး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကို၏အကြိုးတန်ဖိုးများနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်သာသတင်းအချက်အလက်များလည်းမရှိ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုတစ်ခုအခွအေနေအရပျကိုဦးစားပေး (CPP က) သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromissions သူတို့ရဲ့အကြိုးမက်လုံးပေးတန်ဖိုးများအတွက်ကွာခြားခြင်းရှိမရှိဖြေရှင်းရန်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း differential ကိုကြိုးတန်ဖိုးများကိုကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိအမှာစကားပြောကြားသည်။ လိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအထီး CPP က box ထဲမှာအခန်းတဦးနှင့်အတူ intromissions သို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ဖြစ်စေ၏တဦးတည်းတွဲဖက်မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အေးစက်ပြီးနောက် CPP ကယန္တရား၏အသီးအသီးအခန်းသုံးစွဲအချိန်ပမာဏကိုပြီးတော့တိုင်းတာခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်လိင်အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ်များအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့သာလိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်လိင်ကြုံတွေ့မဟုတ်နေစဉ်, အထီး intromissions များအတွက် CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး, လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်, သတ်မှတ်ထားသောအခန်းထဲကအတူသုတ်ရည်လွှတ်၏မျိုးစုံဒဿနိကဗေဒ intromissions ၏ display ကိုအတူတွဲထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲကတစ် CPP ကဆွေမျိုးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအဲဒီမှာကြိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုအဆင့်ဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်အကျိုးအရှိဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ပြီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို၏အကြိုးမက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအပျေါမှီခိုကြောင်းကိုအဆိုပါယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။
ခရစ္စအမ် Tenk,1,* ဟေလာရီ Wilson က,3,* Qi Zhang က,1 Kyle K. အိုး,1,2 နှင့် Lique အမ် Coolen1,2
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Horm ပြုမူနေ
အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ anogenital စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု, တောင်ပေါ်, intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောဒြပ်စင်၏ရေးစပ်တဲ့ကြိုးများနှင့်အားဖြည့်အပြုအမူဖြစ်ပါသည်။ သုတ်ရည်လွှတ် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအများဆုံးအားဖြည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသောCoolen et al ။ , 2004; ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ရှု Pfaus နှင့် Phillips က, 1991) ။ ဥပမာအားဖြင့်, သာ intromit ခွင့်ပြုခဲ့သို့မဟုတ် mount, ဒါပေမယ့် ejaculate မဟုတ်ယောက်ျားမှမတူဘဲ, သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulate ခွင့်ပြုခဲ့အထီးကို T-ဝင်္ (ခုနှစ်တွင်ပိုမြန်ပြေးအမြန်နှုန်းတီထွင်Kagan ကပြောပါတယ်, 1955), ဖြောင့်-လက်မောင်းလေယာဉ်ပြေးလမ်း (လိုပက်ဇ် et al ။ , 1955), သို့မဟုတ်အတားအဆီးတောင်တက် (ရှက်ဖီး et al ။ , 1951) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတ်ရည်လွှတ် conditional copulatory ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒါကလက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူတစ်ဝတ္ထုအနံ့၏အသင်းအဖွဲ့ (များအတွက် preference ကိုမှဦးဆောင်အဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulate ခွင့်ပြုခဲ့ယောက်ျားတစ်အလားတူရနံ့အမျိုးသမီး, ဆီသို့ facilitated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ intromissions ဖော်ပြရန်ခွင့်မပြုဖြစ်ပါသည်Kippin နှင့် Pfaus, 2001).
သုတ်ရည်ထိအဆိုပါကြိုးရှုထောင့်တစ်ဦး conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) ပါရာဒိုင်း (ကိုသုံးပြီးသရုပ်ပြခဲ့ကြPfaus နှင့် Phillips က, 1991) ။ အဆိုပါ CPP ကပါရာဒိုင်းအစီအမံယခင်ကအားဖြည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြနှင့်ဤကြိုးဖြစ်ရပ်များနှင့်အကျိုးကို-related လှုံ့ဆော်မှု (၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုချဉ်းကပ်Carr က et al ။ , 1989) ။ ပုံမှန်အား CPP ကသရုပ်ပြအသုံးပြုတဲ့ယန္တရားခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူ differential တွဲဖြစ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အခန်းပါဝင်ပါသည်: တဘက်ဘာမျှတစ်ခုသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုခြယ်လှယ်နှင့်အတူတွဲနေစဉ်တစ်ဖက်, သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိအတူတွဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်သုတ်ရည်လွှတ်မှ copulate ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်အထီးကြွက်ကဒီအပြုအမူနှင့်အတူတွဲအဆိုပါအခန်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန် (Agmo နှင့် Berenfeld, 1990; Martinez နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 2001) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုအပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် intromissions ၏ display ကိုလုံလောက်သောလျှင်ရှိမရှိမသိရသည်။ ကျနော်တို့သုတ်ရည်လွှတ်ယင်း၏ သာ. ကြီးမြတ်မက်လုံးပေးဂုဏ်သတ္တိများဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများပေးထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အခြားဒြပ်စင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်း hypothesize ။
လေးစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်အေးစက်ဒီဇိုင်းနှင့်အုပ်စုတစ်စုနံပါတ်များတွင်ဖော်ပြပါရှိသည် စားပွဲတင် 1။ (သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲခြောက်ရှစ် intromissions; ဎ = 10) ပထမစမ်းသပ်မှုများတွင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ် (ဎ = 11) သို့မဟုတ် intromissions ဖြစ်စေလက်ခံရရှိမျှလိင်အပြုအမူဟာအစပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းထဲကအတူတွဲခဲ့သည်နေစဉ်ပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကအတူတွဲ။ သုတ်ရည်လွှတ်၏ display သုတ်ရည်လွှတ်ပေါ်မှာတိရစ္ဆာန်အပြသမှုအဖြစ်အမျိုးသမီးအဖော်အတွက်အင်္ဂါဇာတ် plug ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းဝိသေသမော်တာအပြုအမူအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုယောက်ျား၏ပါဝင်သည်ဟု, ထည့်သွင်းခဲ့သည် (ဎ = 10) ကိုင်တွယ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုထိန်းသိမ်းရေးအောက်ပါ CPP ကယန္တရား၏အခန်းထိတွေ့ပေမယ့်မိတ်လိုက်စရာမလိုဘဲခဲ့ကြသည်ကြောင်းကို၎င်း, အရှင်ကို un-နှိုးဆွထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုများတွင်လိင်ကြုံတွေ့အထီးအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားကြိုတင် CPP ကအေးစက်ငါးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများအတွက်တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်မှ mated ခဲ့ကြသည်။ ငါးပါးအစည်းအဝေးများသုံးခုအတွက်သုတ်ရည်လွှတ်ပြသသာယောက်ျားသည်ဤစမ်းသပ်မှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှု 1 ၌ရှိသကဲ့သို့, ဤလိင်ကကြုံတွေ့ယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ် (ဎ = 10) သို့မဟုတ် intromissions ဖြစ်စေနှင့်အတူအေးစက်လက်ခံရရှိ (သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲခြောက်ရှစ် intromissions; ဎ = 10) မျှလိင်အပြုအမူကိုအခြားအတူတွဲခဲ့သည်နေစဉ်ပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကအတူတွဲ အခန်းထဲက။ တတိယစမ်းသပ်မှုများတွင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီး (ဎ = 8) ကကနဦး Non-နှစ်သက်သောအခန်းထဲကနှင့် intromissions (သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲခြောက်ရှစ် intromissions) နဲ့တွဲသုတ်ရည်လွှတ်ပြသအခြား (ထိန်းချုပ်မှု) အခန်းထဲကအတူတွဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, စတုတ္ထစမ်းသပ်မှု, ကြိုတင်ဒီစမ်းသပ်မှုမှလိင်ရင်တော့မှားမယ်ခဲ့အထီး (ဎ = 10) တွင်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် intromissions (ခြောက်ရှစ် intromissions) ပြသယခင်စမ်းသပ်မှု၌ရှိသကဲ့သို့, အသီးသီးတို့သည်ပိုင်းတွင် Non-နှစ်သက်သောသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအခန်းများနှင့်အတူတွဲ။ သို့သော်ဒီနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုထဲမှာ, အေးစက်အဆင့်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် intromissions (တစ်ဦးချင်းစီတွဲဖက်မှု၏ 3) ၏အခြားကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုလက်ခံရရှိကူထီးထားတဲ့ကာလအတွင်းခြောက်လအေးစက်ရက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏ထက်ဝက်ကိုပထမဦးဆုံးအေးစက်နေ့၌ချိတ်တွဲထားတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်လက်ခံရရှိနှင့်တစ်ဝက်တစ် intromissions တွဲဖက်မှုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်များသည် pretest နှင့် posttest (စဉ်အတွင်းအခန်းသုံးစွဲအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းလိင်ရင်တော့မှားမယ်အထီး, အသုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအခန်းထဲသို့သိသိသာသာ CPP ကဆည်းပူးကြောင်းပြသသဖန်းသီး။ 1) ။ အဆိုပါ preference ကိုရမှတ် (နှစ်ဦးစလုံးp= 0.023) နှင့်ကွာခြားချက်ရမှတ် (p= 0.012) သည်သုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအခန်းကုန်ကာလ၌သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားကိုလည်း intromission-တွဲအခန်းထဲသို့သိသိသာသာ CPP ကရရှိခဲ့သည်။ အေးစက်ပြီးနောက်ရင်တော့မှားမယ်အထီး (ထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲကထက် intromission-တွဲအခန်းသိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ကုန်p= 0.006 preference ကိုရမှတ်; p= 0.005 ခြားနားချက်ရမှတ်; သဖန်းသီး။ 1) ။ 35.8, p = 2.9 ± 38.3% သာရှိပြီးပြည်ပမှ 2.7 ± 0.47%; Difference ရမှတ်: Posttest နှိုင်းယှဉ် Pretest: un-stimulation ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားမဆိုဦးစားပေး (ဦးစားပေးရမှတ်ဖွဲ့စည်းရန်မပြုခဲ့ Posttest နှိုင်းယှဉ် Pretest: 168.4 စက္က± 34.4, p နှိုင်းယှဉ် 152.4 စက္က± 33.3 = 0.71) ။
သုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကို (A, B) သို့မဟုတ် intromissions (C, D) နဲ့တစျခုမှာတွဲဖက်မှုလိင်နုံယောက်ျားအတွက် CPP ကသွေးဆောင်။ (က, C) preference ကိုရမှတ်သည် ejaculation- (က) သို့မဟုတ် intromissions- (C) တွဲအခန်းသုံးစွဲအချိန်ရာခိုင်နှုန်း။ (ခ D) ခြားနားချက်ရမှတ်, အချိန် ...
ဒုတိယစမ်းသပ်ချက်အနေဖြင့်ရလဒ်များ preference ကိုရမှတ် (နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သိသိသာသာတိုးခြင်းဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြိုတင် CPP ကစမ်းသပ်ဖို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလက်ခံရရှိကြောင်းယောက်ျားလည်း, ထိုသုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအခန်းထဲသို့တစ်ဦး CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းထင်ရှားp<0.001) နှင့်ခြားနားချက်ရမှတ် (p<0.001; သဖန်းသီး။ 2) ။ သို့သော်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက်တွေ့ရှိချက်မတူဘဲအတွက်လိင်ကြုံတွေ့အထီး intromissions-တွဲအခန်းထဲသို့တစ်ဦး CPP ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပါဘူး။ အဆိုပါ preference ကိုရမှတ် (မတည်မp= 0.183) မကွာခြားချက်ရမှတ် (p= 0.235) သိသိသာသာ (အေးစက်ပြီးနောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်သဖန်းသီး။ 2).
သုတ်ရည်လွှတ် (က, C) ၏ display ကိုနှင့်အတူတစျခုမှာတွဲဖက်မှု, ဒါပေမယ့်မရလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက် CPP ကသွေးဆောင် intromissions (C, D) နှင့်အတူ။ (က, C) preference ကိုရမှတ်သည် ejaculation- (က) သို့မဟုတ် intromissions- (C) တွဲအခန်းသုံးစွဲအချိန်ရာခိုင်နှုန်း။ (ခ D) ခြားနားချက် ...
တတိယနှင့်စတုတ္ထစမ်းသပ်ချက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ် intromissions နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏ရလဒ်များကိုပထမဦးဆုံးပြကြိုတင် CPP ကစမ်းသပ်ဖို့လိင်ရင်တော့မှားမယ်ခဲ့အထီး (အခနျးနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာလိင်အပြုအမူ၏တစ်ဦးတည်းသာတွဲဖက်မှုပြီးနောက် intromissions-တွဲအခန်းထဲကဖို့သုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအခန်းထဲကဆွေမျိုးတစ်ဦး CPP ကဖွဲ့စည်းမပြုခဲ့သဖန်းသီး။ 3) ။ ကျနော်တို့သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းနှင့် intromission ၏တစ်ခုတည်းတွဲဖက်မှုလိင်ရင်တော့မှားမယ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ခြားနားချက်သွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းတွေးဆ။ ထို့ကြောင့်, စတုတ္ထစမ်းသပ်မှုအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေး၏အသီးအသီးအမျိုးအစားသုံးခုပါဝင်သည်ဟုတစ်ခုတိုးချဲ့အေးစက်ကာလနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည်။ အမှန်စင်စစ်သုံးဒဿနိကဗေဒ intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်၏တစ်ဦးချင်းစီပြီးနောက်, ယောက်ျား (နှစ်ဦးစလုံး preference ကိုများနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များအတွက်သိသိသာသာတိုးပြသခဲ့သည်p<0.001 preference ကိုနှင့်ခြားနားချက်ရမှတ်များအတွက်; သဖန်းသီး။ 3) သည်သုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအဆိုပါ intromission-တွဲအခန်းထဲသို့ဆွေမျိုးများအတွက်။ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ intromissions ၏ display ကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်မျိုးစုံစုံတွဲနဲ့, သုတ်ရည်လွှတ်တဲ့ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်။
ထိန်းချုပ်မှုအခန်းထဲက intromissions (A, B) ၏ display ကိုအတူတွဲသောအခါသုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုနှင့်အတူတစျခုမှာတွဲဖက်မှုလိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားအတွက် CPP ကသွေးဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြ, ကြိုတင်အေးစက်၏စတင်ခြင်းမှလိင်ရင်တော့မှားမယ်ခဲ့အထီးဝယ်ယူ ...
ဒဿနိကဗေဒ intromissions ၏ display နဲ့အတူဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့်အခါဤအအနီးကပ်ပုံမှန်အားသုတ်ရည်လွှတ်ရှေ့ intromissions ၏နံပါတ်ကိုက်ညီမှုကတည်းကစမ်းသပ်မှုများတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, ယောက်ျား (6-8 intromissions ဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်Coolen et al ။ , 1996; Coolen et al ။ , 2003a) ။ အမှန်မှာထိုသုတ်ရည်လွှတ်-တွဲအုပ်စုများအတွက်များစွာသောယောက်ျားကြိုတင်သုတ်ရည်လွှတ်မှ 8 သို့မဟုတ်နည်းပါးလာ intromissions ပြသ။ သို့သော်စမ်းသပ်ချက်အသီးအသီးရှိအခြို့အထီးကြိုတင်သုတ်ရည်လွှတ်မှ 8 intromissions ထက်ပိုမိုပြသ။ ထို့ကြောင့်, intromissions နှင့် CPP, ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖွဲ့စည်းခြင်း၏နံပါတ်များအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ intromissions နှင့် CPP ၏စကားရပ်၏နံပါတ်များအကြားစမ်းသပ်ချက်မဆိုမဆက်စပ်မှုရှိကြ၏ဖော်ပြခဲ့တယ်။
CPP က (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုတဲ့ရေတွင်း-ထူထောင်ပါရာဒိုင်းဖြစ်ပါသည်Hughes et al ။ , 1990; Mehrara နှင့် Baum, 1990; Miller နဲ့ Baum, 1987) ။ အဆိုပါ CPP ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှစ်ခုမူကွဲ, postcopulatory ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့် copulatory ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ, (မိတ်လိုက်သည့် CPP ကအခန်းရာအရပ်ကိုကြာသို့မဟုတ်မရှိမရှိအတွက်ကွာခြားPfaus et al ။ , 2001) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်ပထမဦးဆုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၌အထီးကြွက်သီးခြားနယ်ပယ်ထဲမှာ copulate ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်ထို့နောက် CPP ကယန္တရားထဲကတစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအခန်းမှချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဒုတိယလုပ်ထုံးလုပ်နည်းခုနှစ်, သုတ်ရည်လွှတ်မှသုတ်ရည်ထိပု CPP ကအခန်းထဲကသူ့ဟာသူအတွင်းပေါ်ပေါက်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှု။ သို့သော် postcopulatory ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ CPP က၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပပျောက်ဖို့ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အထီးကြွက်ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိတွေ့နေကြသောအခါ, mesolimbic စနစ် (activated ဖြစ်လာBalfour et al ။ , 2004) ယူဆရသည့်အေးစက်တွေကိုတုန့်ပြန်မျှော်လင့်ထင်ဟပ်။ တစ်ဦး copulatory CPP ကပါရာဒိုင်းများအသုံးပြုမှုထို့ကြောင့် CPP ကအခန်းကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဆက်စပ် Conditions တွေကိုထိတွေ့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကွောငျ့, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်လိင်ရင်တော့မှားမယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက် intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုခွဲထုတ်နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါ postcopulatory လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
CPP ကစမ်းသပ်ချက်အတွက်နောက်ထပ် variable ကိုအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ်ဖြစ်ပါသည်: တစ်ခုတည်းဖြစ်စေ (Straiko et al ။ , 2007) သို့မဟုတ်မျိုးစုံကွန်မြူနစ်ဝါဒ (Garcia က Horsman နှင့်သိပ်မရှိပါဘူး, 2004; Hughes et al ။ , 1990; Miller နဲ့ Baum, 1987) မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီမှု။ လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ဦးရည်မှန်းချက်လိင်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ခဲ့ကတည်းကတစ်ခုတည်းသောဒဿနိကဗေဒမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် CPP ကတစ်ဦးမျက်နှာကြက်ရောက်ရှိတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်စမ်းသပ်ချက်များအများစုတို့အတွက်အသုံးချခဲ့ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို (ယခင်လေ့လာမှုများကိုအတည်ပြုAgmo နှင့် Berenfeld, 1990) အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသုတ်ရည်လွှတ်၏တစ်ခုတည်း paring, ယောက်ျားအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏ဝယ်ယူဘို့လုံလောက်ကြောင်း။
ပစ္စုပ္ပန်စမ်းသပ်ချက်များတွင်လိင်ရင်တော့မှားမယ်ယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ် intromissions ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကိုရှိကြောင်းကိုညွှန်းတဲ့ intromission-တွဲပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ထားတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်-တွဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု CPP ကရရှိခဲ့သည်။ ဤရလဒ် (ကို T-ဝင်္အတွက်ယခင်သင်ယူမှု / အားဖြည့်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Kagan ကပြောပါတယ်, 1955), ဖြောင့်-လက်မောင်းလေယာဉ်ပြေးလမ်း (လိုပက်ဇ် et al ။ , 1955), သို့မဟုတ်အတားအဆီးတောင်တက် (ရှက်ဖီး et al ။ , 1951), အရာတစျယောကျတညျးတောင်ပေါ်သို့မဟုတ် intromissions ထက်သုတ်ရည်လွှတ်ပိုပြီးအားဖြည့်ကြောင်းပြသပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတ်ရည်လွှတ် (conditional copulatory ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲKippin နှင့် Pfaus, 2001) ။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်ခရော et ခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်ထားယူဆချက်ကိုထောကျပံ့။ အယ်လ်။ (1993) "တစ်ဦးစစ်ကူအဖြစ်လိင်၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုက်ရိုက် copulatory အပြုအမူ sequence ကိုဖြည့်စွက် subjects မှရသောအတိုင်းအတာနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်" အဲဒီ။
သုတ်ရည်လွှတ် intromissions ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိချက်အာရုံကြောလမ်းကြောင်း ejaculation- ရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ် intromission-related အချက်ပြမှုများများအတွက်တည်ရှိခွဲခြားသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ဒီအယူအဆ၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်, အာရုံကြော activation များအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ် Fos သုံးပြီးကြွက်, ကြွက်နှင့်တက်လာတယ်, အတွက်အများအပြားလေ့လာမှုများ, ပု medial amygdala ၏သေးငယ်တဲ့ငျဒသေရှိ၏အိပ်ရာနျူကလိယအထူးသသုတ်ရည်လွှတ်အသုံးပြုပုံသော်လည်းမတောင်ပေါ်သို့မဟုတ် intromissions အားဖြင့်သွေးဆောင်အာရုံကြော activation သရုပ်ပြပါပြီ အဆိုပါ stria terminalis, preoptic ဧရိယာနှင့် posterior intralaminar thalamus (Coolen et al ။ , 1996; Coolen et al ။ , 1997; Coolen et al ။ , 2003a; Heeb နှင့် Yahr, 1996; Kollack-Walker ကနှင့် Newman က, 1997) ။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကဤအသုတ်ရည်လွှတ်-activated ဒေသများအတွက် lumbosacral ကျောရိုးကနေသွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိနှင့် retrograde သဲလွန်စများနှင့် hemisections thalamus intralaminar အဆိုပါ posterior ၏သုတ်ရည်လွှတ်-activated မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းကြောင်းသုံးပြီးသရုပ်ပြလျှင်, ဆိုလိုသည်မှာ medial subparafascicular thalamic နျူကလိယ (mSPFp) တစ်ဦးအနေဖြင့်တစ်မူထူးခြားသော input ကိုလက်ခံရရှိစမ်းသပ်ပြီး အဆိုပါ lumbar ကျောရိုးထဲမှာအာရုံခံ၏လူဦးရေ (Coolen et al ။ , 2003a; Coolen et al ။ , 2003b; Ju et al ။ , 1987; Truitt et al ။ , 2003b) ။ အလှည့်တွင်ဤဆဲလ် (သုတ်ရည်လွှတ်အတူသော်လည်းမတောင်ပေါ်သို့မဟုတ် intromissions နှင့်အတူသူတို့၏အခန်းကဏ္ဍကိုထောက်ခံကြောင်းသုတ်ရည်လွှတ်-related တွေကို processing အတွက်အထူး Fos ဖော်ပြTruitt et al ။ , 2003a) ။ ထိုမှတပါး, lumbar mSPFp-ထုတ်လုပ်တဲ့ဆဲလ်၏ဤလူဦးရေအရံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကနေသုတ်ရည်လွှတ်-related အာရုံခံသွင်းအားစုနှင့်လက်ခံ galanin, cholecystokinin, နှင့် opioid enkephalin (အပါအဝင်မြောက်မြားစွာ neuropeptides, ဖော်ပြနိုင်ရန်ခန္ဓာဗေဒအနေအထား၌ရှိကြ၏Coolen et al ။ , 2003b; Ju et al ။ , 1987; က Nicholas et al ။ , 1999) ။ function တွေဖြစ်တဲ့ CPP ကအဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်-သွေးဆောင်အပြုအမူတွေ, ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဒီလမ်းကြောင်းနှင့် neurotransmitters, အတွင်းမယ်ဆိုရင်လောလောဆယ်ကြောင့်မသိနိုင်ပါဘူး။
Agmo တစ်ဦးက, ဂိုမက်ဇအမ်လိင်အားဖြည့်သည့် medial preoptic ဧရိယာသို့ naloxone ၏ပြုတ်ရည်များကပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1993; 107: 812-818 ။ [PubMed]
Carr က GD, Fibiger HC, Phillips က AG က။ မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်အေးစက်သောအရပ် preference ကို။ Liebman JM, Cooper က SJ, အယ်ဒီတာများ in: ။ ဆုလာဘ်၏ neuropharmacological အခြေခံ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1989 ။ စစ။ 264-319 ။
Coolen LM, Olivier B က, ပီတာ HJ, Veening JG ။ 5-HT1A agonist 8-Oh-DPAT သုံးပြီးအထီးကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာသုတ်ရည်လွှတ်-သွေးဆောင်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုဆန္ဒပြပွဲ။ Physiol ပြုမူနေ။ 1997; 62: 881-891 ။ [PubMed]
Coolen LM, ပီတာ HJ, Veening JG ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သူတွေရဲ့စားသောက်ဒြပ်စင်ပြီးနောက်ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Fos immunoreactivity: တစ်လိင်နှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1996; 738: 67-82 ။ [PubMed]
Coolen LM, Veening JG, Petersen DW, Shipley MT ။ ကြွက်များတွင် Parvocellular subparafascicular thalamic နျူကလိယ: ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ compartmentalization ။ J ကို comp Neurol ။ 2003a; 463: 117-131 ။ [PubMed]
Coolen LM, Veening JG, ဝဲလ် AB, Shipley MT ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အဘို့သက်သေအထောက်အထား: ကြွက်များတွင် parvocellular subparafascicular thalamic နျူကလိယ၏ Afferent ဆက်သွယ်မှု။ J ကို comp Neurol ။ 2003b; 463: 132-156 ။ [PubMed]
Garcia က Horsman P ကို, သိပ်မရှိပါဘူး RG ။ Dopamine ရန်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်အရှိန်အဟုန်မိတ်လိုက်အပြုအမူအားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပိတျဆို့ကြပါဘူး။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2004; 118: 356-364 ။ [PubMed]
Heeb MM, လိင်-related လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိတွေ့ပြီးနောက် hypothalamus နှင့်အထီးတက်လာတယ်, ၏ဆက်စပ်ဦးနှောက်တိုင်းဒေသကြီးများ၏လိင် dimorphic ဧရိယာ၌ Yahr P. က c-Fos immunoreactivity ။ neuroscience ။ 1996; 72: 1049-1071 ။ [PubMed]
Hughes လေး, Everitt BJ, opioid peptides, တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သင်း၏ preoptic ဧရိယာတာဟာ၏ဟားဘတ်ဂျေနှိုင်းယှဉ်သက်ရောက်မှု: ဆာပအပြုအမူ၏လေ့လာမှုများ, Conditions ရာအရပျ preference ကိုများနှင့်မိတ်ဖက် preference ကို။ Psychopharmacology (Berl) 1990; 102: 243-256 ။ [PubMed]
Ju, G, Melander T က, Ceccatelli S က, Hokfelt T က, ကြွက်များတွင် cholecystokinin- နှင့် galanin ကဲ့သို့ immunoreactivities Co-င်တစ်ဦး spinothalamic လမ်းကြောင်းများအတွက် Frey P. Immunohistochemical သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience ။ 1987; 20: 439-456 ။ [PubMed]
မပြည့်စုံခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Kagan ကပြောပါတယ်ဂျေ Differential ဆုလာဘ်တန်ဖိုး။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1955; 48: 59-64 ။ [PubMed]
Kippin TE, Pfaus JG ။ အထီးကြွက်များတွင် olfactory conditional ejaculatory ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်။ ချွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု၏ဗြဲသဘာဝတရား။ Physiol ပြုမူနေ။ 2001; 73: 457-469 ။ [PubMed]
Kollack-Walker က S နဲ့, Newman က SW ။ အထီးဆီးရီးယားဟမ်းစတားကဦးနှောက်ထဲမှာက c-fos ၏မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်စကားရပ်: အတွေ့အကြုံ, pheromones နှင့်သုက်၏အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို Neurobiol ။ 1997; 32: 481-501 ။ [PubMed]
လိုပက်ဇ်နာရီ, Olster DH, ယောက်ျားကြွက်များတွင် Ettenberg အေလိင်လှုံ့ဆျောမှု: မူလတန်းမက်လုံးပေးခြင်းနှင့် copulatory အတွေ့အကြုံကို၏အခန်းကဏ္ဍကို။ comp Physiol Psychol ။ 1955; 48: 59-64 ။ [PubMed]
Mehrara BJ, Baum MJ ။ Naloxone ဟူသောအသုံးအနှုနျးသော်လည်းမတစ်ဦး oestrous အမျိုးသမီးတစ် conditional ရာအရပျ preference ကိုတုန့်ပြန်၏အထီးကြွက်များအားဖြင့်ဝယ်ယူ disrupts ။ Psychopharmacology (Berl) 1990; 101: 118-125 ။ [PubMed]
Miller က RL, Baum MJ ။ Naloxone မကြာမီသင်းပြီးနောက်အထီးကြွက်များတွင်တစ်ခု estrous အမျိုးသမီးများအတွက်မိတ်လိုက်နှင့် conditional ရာအရပျ preference ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1987; 26: 781-789 ။ [PubMed]
က Nicholas AP, Zhang က X ကို, ယောက်ျားကြွက် lumbosacral ကျောရိုး၏ lamina X ကိုအတွက် opioid ဆဲလ်ကော်လံ Hokfelt တီတစ်ခု immunohistochemical စုံစမ်းစစ်ဆေး။ neuroscience လက်တ။ 1999; 270: 9-12 ။ [PubMed]
Pfaus JG, Phillips က AG က။ အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ dopamine ၏အခန်းက္ပ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1991; 105: 727-743 ။ [PubMed]
ရှက်ဖီး FD, Wulff JJ, ကျောထောက်နောက်ခံ R. လိင် drive ကိုလျှော့ချခြင်းမရှိဘဲသုတ်ရည်ထိဆုကြေးတန်ဖိုး။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1951; 44: 3-8 ။ [PubMed]
Straiko MM, Gudelsky GA, Coolen LM ။ MDMA တစ် serotonin-depleting regimen နှင့်အတူကုသမှုအထီးကြွက်များတွင်လိင်မှ conditional ရာအရပျ preference ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2007; 121: 586-593 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Truitt WA, Domingues JM, Adelman J ကို, Coolen LM ။ အဆိုပါ medial parvocellular parafascicular thalamic နျူကလိယသို့ Galanin တာဟာအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီး။ Horm ပြုမူနေ။ 2003a; 44: 81 ။
Truitt WA, Shipley MT, Veening JG, Coolen LM ။ အထီးပေမယ့်အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူပြီးနောက် lumbar spinothalamic အာရုံခံတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်၏ activation ။ J ကို neuroscience ။ 2003b; 23: 325-331 ။ [PubMed]